ODUU: Itoophiyaa keessatti guyyaatti lubbuun namoota 31 sababa 'HIV/AIDS' darba jedhame
1 year, 5 months ago 804 Qoodi
Weerarri HIV/AIDS erga addunyaarra dhalate waggaa 40 lakkoofsiseera. Waggoottan kana keessatti namoonni miiliyoona 32.7 sababa vaayirasichaan lubbuu isaani dhabaniiru. Itoophiyaa keessatti ammoo waggaatti lubbuu namoota 14,000 ol akka darbu Biiroon Ittisa fi To'annoo HIV Federaalaa ibsaniiru.
Itoophiyaatti yeroo ammaa kana namoonni kuma 669 vaayirasicha waliin jiraachaa kan jiraatan yoo ta'u, guyyaatti namoonni 31 sababa vaayirasichaan lubbuu isaani akka dhaban Daayrektara Kominikeshinii Biirichaa Obbo Daani'eel Batra himaniiru.
Qorannoo Dhaabbata Fayyaa Addunyaa bara 2019 hojjete akka mul'isuutti addunyaarra namoonni miiliyoona 38 ta'an vaayirasicha waliin jiraachaa jiru. Bara qorannoon kun baheetti namoonni haaraa miiliyoona 1.7 vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u, namoonni kuma 690 lubbuu isaani darbeera.
Har'a Muddee 01/2020 sadarkaa idil addunyaatti guyyaan farra HIV/AIDS dhaadannoo "HIV/AIDS ittisuuf walta'iinsa idil addunyaa itti gaafatamummaa walooti" jedhuun kabajameera.
Maddi: Addis Zeybe
Fayyaa HIV-AIDS Itoophiyaa
Aug. 18, 2021, 7:30 a.m.
Diinagdee: Dhaabbileen liqii idil-addunyaa Itoophiyaaf liqaa gadi dhiisuu tursiisan
Aug. 1, 2021, 5:22 a.m.
Sudaan bishaan Abbayyaa gurraacha gara daangaashee gale akka hir'ate ibsite
June 15, 2021, 11:57 a.m.
1 MM Abiy Ahimad; Obbo Lammaa dabalatee namoota ida'amuu qeeqaniif deebii kennan
2 Barattoonni qormaata biyyooleessaa kutaa 12ffaa fudhatan 702 qabxii 600 ol galmeessan
3 Dhaddacha: Obbo Jawaar Mohammad ogeessa fayyaa dhuunfaan yaalii akka argatan ajajame
4 Obbo Lammaa Magarsaa tibbana VOA Afaan Oromoo waliin gaaffiif deebii taasisaniiru?
5 Lammaa Magarsaa: OBN sagalee Obboo Lammaa ugguruun gaazexeessitoota mufachiise
6 Naannoo magaala Maqalee xiyyaara waraanaa fayyadamuun boombiin haleelame
7 Dhaddacha: "Yeroo lammataaf shororkeessummaan himatamuu kootti nan boona" – Jawaar Mohaammad
8 Bara barnoota Dhaabbilee Barnoota Olaanoo gara 2013 darbu danda'a jedhame
9 ODUU: Yaada murtoo manneen barnoota haala itti deebi'anii banaman irratti mari'atame
10 Injinar Taakkalaa Uumaan aangoo akka gadhiisan murtaa'e